Maxkamadda ICC oo arruurinaysa tacadiyada muhaajiriinta loogu gaysto Liibiya - BBC News Somali
Maxkamadda ICC oo arruurinaysa tacadiyada muhaajiriinta loogu gaysto Liibiya
Image caption Fatou Bensouda waa haweenayda fadhida midgta safka koobaad
Dacwad oogaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, Fatou Bensouda, ayaa sheegtay in kooxdeedu ay uruurinayaan caddeymo ku aaddan dambiyada la sheegay in loo gaystay muhaajiriinta ka talowda badda dalka Liibya.
Bensouda ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo fadhigoodu yahay magaalada New York u sheegtay in Liibiya ay u muuqato inay suuq u noqotay dadka la tahriibiyo, iyadoo kumannaan muhaajiriin ah oo nugul oo ay ka mid yihiin haween iyo carruur lagu haysto qeyba ka mid ah dalkaasi.
Liibya waxay noqotay halka ay sii maraan muhaajiriinta doonanaya in ay galaan Yurub ee beegsanaya tahriibka badda.
Sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ee soo galootiga ee IOM 20 kun oo muhaajiriin ah ayaa gacanta ugu jira kooxo burcad ah waxaana lagu hayaa xarummo ama goobo aan sharciyeysnayn.
Waxay intaasi ku dartay in tiro intaasi ka badan laga ganacsado oo la isku dhaafsado sida addoontii.
Boqolaal ku dhimatay xeebaha Liibiya
Britain oo lagu eedeeyay duullaankii Liibiya
Talyaaniga iyo Liibiya oo iska kaashanaya xakameynta tahriibka
Waxaa loo gaystaan xadgudubyo dhinaca galmada ah, isla markaasna waa lagu shaqeystaa.
Gollaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sanadkii 2011-kii waydiistay maxakamada ICC in ay baaritaano ku samayso falal dambiyeedyada lagu la kacay muhaajiriinta, iyadoo isla sanadkaasi ahaa bilawgii kacdoonkii xukunka lagaga tuuray hoggaamiyihii hore ee Libya Mucamar Al-Qadaafi.
Faransiiska oo xiray Rai'salwasaarihii hore ee Kosovo
ICC oo 9 sano oo xabsi ku xukuntay nin ka tirsan Islaamiyiinta Mali
Putin oo saxiixay in dalkiisu ka baxo maxkamadda ICC
Burundi oo ka bexeyso maxkamadda ICC
Israa'iil oo dal ku galka ka mamnuucday dadka ku baaqa in aan alaabtooda la iibsanin
Maxkamadda ICC oo la bilaabay 2002-dii ayaa waxay leedahay awood caalami ah oo ay ku baari karto kuna maxkamadeyn karto dambiyadda sida xasuuqa, dambiyada ka dhanka ah aadanaha iyo dambiyada dagaalka.
Sidoo kale waxay samayn kartaa faragelin haddii Qaramada Midoobay loo gudbiyo kiisaska ay tahay in maxkamaddu ay baarto.
Maqal Xaalka Liibiya 5 sano ka dib geeridii Gaddafi
20 Oktoobar 2016
Libiya: Xayiraad safar oo dumarka oo keli ah la saaray
21 Febraayo 2017
8 Maarso 2017
Goolhaye ku dhimatay badda Mediterranean
3 Nofembar 2016
7 Maarso 2017
Abukhamada oo ballan qaaday ilaalinta goobaha shidaalka Liibiya
Trump oo sixiixay amar cusub oo socdaalka ah
Masar oo 56 qof u xukuntay dhimashada tahriibayaal